Marpipe: Ku Hubaynta Suuqgeeyayaasha oo wata caqliga ay u baahan yihiin si ay u tijaabiyaan oo ay u helaan xayeysiiska guuleysiga ee hal-abuurka leh | Martech Zone
Marpipe: Ku Hubaynta Suuqgeeyayaasha oo wata caqliga ay u baahan yihiin inay tijaabiyaan oo ay helaan xayeysiis hal abuur leh
Arbacada, December 22, 2021 Arbacada, December 22, 2021 Dan Pantelo
Muddo sanado ah, suuqlayda iyo xayaysiisyadu waxay ku tiirsanaayeen dhagaystayaashu bartilmaameedsanayaan xogta si ay u ogaadaan meesha iyo hortooda cidda ay ku socodsiiyaan xayeysiiskooda hal-abuurnimo. Laakin ka wareegitaankii dhawaa ee dhaqamadii macdan qodista ee duullaanka ahaa - natiijada qawaaniinta cusub iyo kuwa lama huraanka u ah ee ay dajiyeen GDPR, CCPA, iyo Apple's iOS14 - ayaa ka tagay kooxaha suuqgeyntu inay la yaaban yihiin. Iyadoo isticmaaleyaal badan oo badan ay iska dhaafeen dabagalka, xogta la beegsanayo dhagaystayaashu waxay noqotaa mid aan la isku halayn karin.
Summadaha hormoodka u ah suuqyadu waxa ay u weeciyeen shay ay gacanta ku hayaan oo wali saamayn wayn ku yeelan kara beddelka: wax qabadka hal-abuurkooda xayaysiis. Halka tijaabada A/B ay ahayd halbeegga lagu cabbiro awoodda beddelka ee xayaysiisyada, suuqgeynayaashan hal-abuurka leh waxay hadda raadinayaan habab ay uga gudbaan hab-dhaqameedka iyagoo dhisaya oo tijaabinaya noocyo badan oo xayeysiis hal abuur leh.
Dulmarka xalinta Marpipe
Marpipe Waxay u suurtagelisaa kooxaha hal-abuurka leh iyo suuq-geeyayaasha inay ku dhisaan boqollaal xayeysiis kala duwan daqiiqado gudahood, si toos ah u geeyaan muuqaal taagan iyo muuqaal hal-abuur leh dhegaystayaashooda si ay u tijaabiyaan, oo ay u helaan aragtiyo waxqabad oo ay u jajabiyaan curin shakhsi ahaaneed - cinwaanka, sawirka, midabka asalka, iwm.
Iyadoo Marpipe, sumadaha iyo wakaaladu waxay awoodaan:
Si weyn u kordhi tirada hal-abuurka xayaysiiska gaarka ah ee tijaabinta, taas oo si weyn u kordhinaysa jaaniska helitaanka hawl-wadeenno sare
Ka saar eexda geeddi-socodka hal-abuurka adiga oo ku taageeraya go'aamada naqshadaynta xogta beddelidda
Si wanagsan u yeelo xayaysiisyada iyo curiyayaasha hal abuurka leh ee shaqaynaya iyo sababta ay u gaadhi karaan go'aamo degdeg ah oo ku saabsan xayaysiisyada hal-abuurka la cabiro iyo ta la damiyo
Ku dhis xayaysiisyo ka wanaagsan wax ka yar kala badh wakhtiga - 66% dhakhso celcelis ahaan
Imtixaanka Hal-abuurka dhaqameed vs Marpipe
Dhisidda Xayeysiiska Atoomaatiga ah, Markay tahay Cabirka
Dhaqan ahaan, kooxaha hal-abuurka leh waxay leeyihiin baaxadda baaxadda fikradda iyo naqshadeynta laba ilaa saddex xayeysiis oo loogu talagalay tijaabinta. Marpipe iyaga waqti u badbaadiya, taasoo u sahlaysa tobanaan ama boqollaal xayeysiis in hal mar la nashqadeeyo. Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isku darayo isku darka kasta oo suurtagal ah ee curiyeyaasha hal-abuurka ah ee ay bixiyaan kooxda hal-abuurka. Kala duwanaanshiyaha xayeysiisku si dhakhso leh ayay sidan isugu daraan. Tusaale ahaan, shan cinwaan, saddex sawir, iyo laba midab oo asal ah ayaa noqda 30 xayaysiis (5x3x2) iyadoo la gujinayo badhanka. Nidaamkani kaliya ma kordhinayo tirada xayeysiisyada hal-abuurka leh ee tijaabinta, laakiin sidoo kale wuxuu dejiyaa kooxo suuqgeyneed si ay u tijaabiyaan imtixaan kala duwan oo ku saabsan goobta Marpipe - iyaga oo ka dhigaya dhammaan kala duwanaanshaha xayeysiisyada midba midka kale iyada oo la xakameynayo dhammaan doorsoomayaasha hal-abuurka suurtagalka ah.
Si toos ah u dhis dhammaan xayaysiisyada isku darka ah ee suurtogalka ah
Dejinta Imtixaanka Atoomatiga ah, La Xakameysan yahay
Marka dhammaan noocyada xayeysiiska si toos ah loo soo saaro, Marpipe ka dibna si otomaatig ah u sameeya tijaabada kala duwan. Tijaabada kala duwani waxay cabbirtaa waxqabadka doorsoomayaal kasta oo isku darka suurtagal ah. Xaaladda Marpipe, doorsoomayaashu waa curiyeyaasha hal-abuurka ku jira xayeysiis kasta - nuqul, sawirro, wicitaanno ficil, iyo in ka badan. Xayeysiis kasta waxa la dhigayaa xayaysiis u gaar ah miisaaniyada imtixaanku si siman ayaa loogu qaybiyaa dhexdooda si loo xakameeyo doorsoome kale oo natiijada qalloocin kara. Tijaabooyinku waxay socon karaan todoba ama 14 maalmood midkood, taasoo ku xidhan miisaaniyada macaamiisha iyo yoolalka. Iyo kala duwanaanshiyaha xayeysiisku waxa uu hor socdaa dhagaystayaasha ama dhagaystayaasha jira ee macaamilka, taas oo keenta aragtiyo macno badan leh.
Qaab dhismeedka imtixaanada kala duwani waxa uu wadaa hufnaanta oo waxa uu xakameeyaa doorsoomayaasha oo dhan
Sirdoonka Hal abuurka
Sida imtixaanadu u socdaan koorsadooda, Marpipe waxay keentaa xogta waxqabadka xayaysiis kasta iyo sidoo kale qayb kasta oo hal abuur leh. Madalku wuxuu raadiyaa, dhagsiinyo, beddelaad, CPA, CTR, iyo in ka badan. Muddo ka dib, Marpipe waxay isu geynaysaa natiijooyinkan si ay u tilmaamto isbeddellada. Halkaa, suuqlayda iyo xayaysiiyayaasha ayaa go'aansan kara xayaysiisyada ay cabbirayaan iyo waxa la tijaabinayo marka xigta iyadoo lagu salaynayo natiijada imtixaanka. Ugu dambeyntii, madalku waxay yeelan doontaa awood ay ku soo jeediso noocyada walxaha hal-abuurka ah ee ay tahay inay tijaabiso iyada oo ku saleysan sirdoonka hal-abuurka taariikhiga ah.
Soo hel xayeysiisyada waxqabadka ugu sarreeya iyo walxaha hal-abuurka leh
Booqo 1:1 Safarka Marpipe
Dhaqannada ugu Fiican ee Imtixaanka Hal-abuurka leh ee Kala duwan
Tijaabada kala-duwan ee cabbirka waa hab cusub oo cusub, mid aan horay u suuro-gal ahayn la'aanteed otomaatig ah. Sidan oo kale, socodka shaqada iyo fikradaha lagama maarmaanka u ah in lagu tijaabiyo hal-abuurka xayeysiiska habkan ayaan weli si ballaaran loogu dhaqmin. Marpipe waxay ogaatay in macaamiisheeda ugu guulaha badan ay raacaan labada hab-dhaqan ee ugu wanaagsan gaar ahaan kuwaas oo ka caawiya inay arkaan qiimaha goobta goor hore:
Qaadashada hab halabuureed modular ee naqshadaynta xayeysiiska. Hal-abuurka qaabaysan wuxuu ku bilaabmaa qaab-dhismeedka, kaas oo gudaha ku yaal meel-hayeyaal shay kasta oo hal-abuur leh si uu ugu dhex noolaado si is-beddel ah. Tusaale ahaan, meel bannaan oo cinwaan ah, meel bannaan oo muuqaal ah, meel bannaan oo badhan ah, iwm. Fikirka iyo qaabaynta habkan waxay noqon kartaa mid adag, sababtoo ah hal-abuur kasta oo shakhsi ah waa inuu macno sameeyaa oo si quruxsan u raaxaystaa marka la isku dhejiyo midba midka kale. curiye hal abuur leh. Qaabayntan dabacsani waxay u oggolaanaysaa kala duwanaansho kasta oo curiye kasta ah in lagu beddelo barnaamij ahaan.
Isku xirka farqiga u dhexeeya hal-abuurka iyo kooxaha suuq-geynta. Kooxaha hal-abuurka leh iyo kooxaha suuq-geynta waxqabadka ee ka shaqeeya xannibaadda waxay u janjeeraan inay helaan abaal-marintii Marpipe dhaqso badan. Kooxahani waxay si wadajir ah u qorsheeyaan imtixaanadooda, dhammaantood waxay ku helayaan isku bog oo ku saabsan waxay rabaan inay bartaan iyo waxyaabaha hal-abuurka ah ayaa halkaas geyn doona. Ma aha oo kaliya inay furaan xayeysiisyada waxqabadka ugu sarreeya iyo curiyeyaasha hal-abuurka leh marar badan, laakiin sidoo kale waxay ku dabaqaan natiijooyinka imtixaannada wareegga xiga ee hal-abuurka xayeysiiska si ay u helaan aragti qoto dheer oo imtixaan kasta ah.
Sirdoonka hal-abuurka ah ee macaamiisha Marpipe waxay ogaadaan maaha oo kaliya inay ka caawiyaan inay fahmaan waxa xayeysiiska hal-abuurka ah ee hadda socda laakiin sidoo kale xayeysiiska hal-abuurka leh ee lagu tijaabinayo xiga.
Sida Dharka Ragga ee Astaanta Taylor Stitch ugu wanagsan tahay yoolkeeda kobaca 50% ee Marpipe
Waqti muhiim ah oo ku jira jihada sare ee shirkadda, kooxda suuqgeynta ee Taylor Stitch waxay isu arkeen arrimo la xidhiidha xatooyada hal-abuurka iyo maamulka xisaabta labadaba. Shaqadooda tijaabinta hal-abuurka leh waxay ahayd mid dheer oo caajis badan, xataa iyada oo ay la socdeen shaqaale naqshadeeyayaasha tayada sare leh iyo lammaane xayaysiis ah oo la aamini karo. Habka dhisidda xayaysiisyada tijaabada, gaarsiinta wakaaladda si loo soo geliyo, xulashada daawadayaasha, iyo bilaabista waxay ahayd mid sahlan laba toddobaad. Iyadoo hadafyada gardarrada ah loo dejiyay helitaanka macmiil cusub - 20% YOY - kooxda Taylor Stitch waxay u baahdeen inay helaan hab ay ku cabbiraan dadaalkooda tijaabada xayeysiiska iyada oo aan si weyn loo kordhin shaqaalaha ama kharashyada.
Adoo isticmaalaya Marpipe si ay otomaatig ugu noqoto dhisitaanka xayeysiiska iyo tijaabinta, Taylor Stitch waxa ay awooday in ay kordhiso tirada hal-abuurka xayaysiiska gaarka ah ee tijaabinta 10x. Kooxdu hadda waxay bilaabi karaan laba tijaabo oo hal abuur leh todobaadkii - mid kasta oo leh in ka badan 80 kala duwanaansho xayeysiis ah, oo dhan iyada oo ujeedadu tahay kaliya rajada macaamiisha cusub. Miisaanka cusubi wuxuu u oggolaanayaa inay tijaabiyaan khadadka alaabta iyo kala duwanaanshiyaha hal-abuurka ah ee aanay waligood awoodin inay hore u yeeshaan. Waxay heleen fikrado la yaab leh, sida xaqiiqda ah in macaamiisha cusub ay u badan tahay inay ku beddelaan fariimaha ku saabsan waaritaanka iyo tayada dharka halkii ay ka ahaan lahaayeen qiimo dhimis. Iyaguna waxay ku wanajiyeen yoolalkooda kobaca YOY 50%.
Akhriso Daraasadda Kiis Marpipe oo dhammaystiran
Tags: Xayeysiiska sirdoonka hal-abuurkanaqshadeynta xayeysiiskasirdoonka adtijaabinta xayeysiiskasirdoonka tijaabinta xayeysiiskaimtixaan xayaysiisimtixaanka otomaatiga ahbandhig imtixaan xayaysiisbandhig imtixaan xayaysiismaareeyaha xayeysiiska facebookkordhinta waxqabadka xayaysiiskamarpipenaqshadeynta moodeelkatijaabinta noocyo badantaylor tolmoimtixaankatijaabinta garaadka
Dan waa madaxa fulinta tignoolajiyada suuq-geynta iyo aasaasaha/gudoomiyaha Marpipe. Ka hor inta aan la aasaasin Marpipe, Dan wuxuu bilaabay la-talin suuq-geyneed qolkiisa hurdada ee kuleejka, kaas oo isu beddelay wakaalad si degdeg ah u koraysa oo fadhigeedu yahay Soho, Manhattan oo ku takhasusay wax soo saarka hal-abuurka iyo abuurista baahida ganacsiyada DTC. Marpipe ayaa markii hore la sameeyay markii ay wakaaladu dhibaato kala kulantay tijaabinta hal-abuurka ah, maantana, Marpipe waxa ay ka ururisay in ka badan $10m oo ay ka mid yihiin Adobe, Samsung, iyo madaxda Buzzfeed, Hubspot, MediaMath, iyo Criteo.
Waa maxay sababta Iibsadayaasha ay ugu dhibtoonayaan shakhsiyaynta E-commerce B2B (iyo sida loo hagaajiyo)
Aragtida Dhagaystaha: Qaybta Dhegaystayaasha Sirdoonka iyo Falanqaynta Software